Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izindaba Zocingo » Umkhiqizo Omusha Usiza Abantu Abanokungabekezelelani Ukudla Bajabulele Ukudla Futhi
Ukungabekezelelani Kokudla Kwenza Abantu Abaningi Bayeke Ukujabulela Ukudla. Imikhiqizo Esekelwe I-Enzyme Ye-Intoleran Ilwa Emuva Ngokusekela Uhlelo Lokugaya.
Inkampani yezempilo yaseDutch i-Intoleran yazi kahle ukuthi bangaki abantu abalwa nokungabekezelelani. Isibonelo, ukungabekezelelani kwe-lactose - ukungakwazi ukudiliza nokugaya kahle ushukela wobisi, i-lactose - kuvame kakhulu. I-National Digestive Diseases Information Clearinghouse (nge-Cornell University) ibika ukuthi abantu baseMelika abangaba yizigidi ezingu-50 abakwazi ukubekezelela i-lactose, kanti lesi simo sidlange kakhulu kubantu base-Afrika baseMelika, e-American Indian, kanye nase-Asian American.
Olunye ucwaningo olubikwe yi-NIH luthi ochwepheshe balinganisela ukuthi isibalo esimangalisayo sama-68% sabantu emhlabeni wonke sihlushwa i-lactose malabsorption. Nakuba kuphela labo ababonisa izimpawu ngempela ababhekwa ngokusemthethweni njengabangabekezeleli i-lactose, usongo olusabalele lokukhathazeka okuhlobene nokugaya okuhlobene ne-lactose luthinta umhlaba wonke. Uma izimpawu zenzeka, zingase zingakhululeki kakhulu futhi zingasukela ekuqunjelweni nasegesini kuya emajaheni esiswini, isicanucanu, ngisho nesifo sohudo nokuhlanza.
Futhi lokho kukodwa nje, ukungabekezelelani okukodwa. Kukhona futhi ukungabekezeleli ama-fructans nama-galactans (njengogalikhi, u-anyanisi, nokolweni) kanye ne-fructose (cabanga ngezithelo noju) kanye ne-sucrose (ushukela omuhle wakudala ophuma eziphuzweni, amaswidi, namasoso.) Eziningi zalezi zinkinga zokugaya ukudla. kungabhekwana nakho kusetshenziswa ukudla kwe-FODMAP, esiza abantu ngabanye ukuthola nokulawula ukuthi yikuphi ukudla abazwela kukho.
Nakuba ukulawula indlela odla ngayo kuwusizo, nokho, ngokuhamba kwesikhathi kuzoba nezikhathi lapho umuntu ebhekana nokudla okuthile aziyo ukuthi kuzomthinta. Ukuvakashela umngane, ukuya ephathini, noma ukumane udle out konke kungaholela ekukhetheni ukudla okulinganiselwe. Yilapho intoleran ingena khona esithombeni.
Umkhiqizo osezingeni eliphezulu waseDutch usuchithe ngaphezu kweshumi leminyaka wenza imikhiqizo yawo esekelwe ku-enzyme iphelele. Lokhu kubhekana nokungabekezelelani okubalulwe ngenhla. Isibonelo, inokubili I-Lactase Drops kanye Nosuku Kanye ukuze ilawule ukungabekezelelani kwe-lactose. I-Fructase isiza ukubekezelela i-fructose. Le nkampani isize yakha i-Quatrase Forte yayo entsha, ebhekana ngokuphepha nokungabekezelelani okuningi ngesikhathi esisodwa. Lolu hlu olubanzi lweminikelo ebhekana nokungabekezelelani okuningi kangaka luhlukile emhlabeni wezempilo.
Umgomo we-Intoleran ngomkhiqizo ngamunye ewukhiqizayo uwukuqinisa isimiso sokugaya ukudla. Ngokuvamile, lokhu kuza ngokunikeza umthamo owengeziwe wama-enzyme wokugaya, aqondiswe ekungabekezelelani okuthile. Noma imaphi ama-enzyme angadingeki emzimbeni angadlula ngendlela engenabungozi emgudwini wokugaya ukudla, okwenza imikhiqizo ye-Intoleran kube lula ukuyihlola njengoba abantu bezama ukuthola ukuthi yikuphi ukungabekezelelani abadinga usizo lokubhekana nakho. Ngaphezu kwalokho, inkampani iya ezinhlungwini ezinkulu ukusebenzisa izithako ezincane. Ukugwema noma yiziphi izithasiselo ezingadingekile kuqinisekisa ukuthi imikhiqizo ingasetshenziswa yizithameli eziningi ngangokunokwenzeka.
Ngenkathi i-Intoleran isebenze ngokuyinhloko izimakethe zaseYurophu esikhathini esedlule, inkampani isezinhlelweni zokungena e-US, futhi. Njengoba imikhiqizo yayo isatshalaliswa emakethe yaseNyakatho Melika ezinyangeni ezizayo, i-Intoleran izohlinzeka ngethuluzi elisha, elisebenziseka kalula ukusiza amashumi ezigidi zabantu baseMelika abanenkinga yokungabekezelelani ukuze bakujabulele ngempela ukudla kwabo futhi.